စားကောင်းမြိန်ရာ ရခိုင်ဟင်းလျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » စားကောင်းမြိန်ရာ ရခိုင်ဟင်းလျာ
Posted by ေမာင္ရိုး on Jun 21, 2012 in Food, Drink & Recipes | 37 comments
ဒီတစ်နေ.လုံး ရန်ကုန်မှာ မိုးရွာလိုက်တာများ အပြင်တောင်မထွက်ချင်ဘူးဗျို. ။ သို.သော်လည်းပေါ.လေ …… လက်လှုပ် ခြေလှုပ်မှ စားဝတ်နေရေးပြေလည်တာဆိုတော.လည်း မိုးထဲလေထဲမှာဘဲ တစ်မြို.လုံး လျောက်ပတ်နေရတော.တာပါဘဲဗျာ …….။ အဲ …နေ.လည်ရောက်တော. အလုပ်ကမပြီးသေး ၊ ထမင်းစားချိန်လဲရောက်ပြီ ထမင်းချိုင်.က မပါ …. ဒါနဲ. ဝယ်စားဖို. ဆိုင်ရှာရတော.တာပေါ. …..။ရောက်နေတဲ.နေရာက ပါရမီ လမ်းကစိန်ဂေဟာစူပါမတ်နားမှာဆိုတော. စားစရာဆိုင်တွေကပေါပါတယ် ။ ဘာစားရမလဲစဉ်းစားရင်း ဟိုကြည်.ဒီကြည်.သွားကြည်.တော. ရခိုင် ထမင်းဆိုင်လေးသွားတွေ. သဗျ ။ အတော်ပဲ လောလောဆယ်ဆယ် ရခိုင်ချစ်တဲ.စိတ်ကလဲ ငယ်ထိတ်ရောက်နေတာဆိုတော. ဘာမှစဉ်းစားမနေတော.ဘူးဆိုင်ထဲခတ်သွက်သွက်ဝင်လိုက်တော.တယ် ။ မိုးကအေးအေး ရခိုင်ဟင်းက ပူစပ်စပ် …….တကယ်.ကိုမှ လိုက်ဘက်ညီသဗျ ။ ဆိုင်ကတော.မြေညီထပ်တိုက်ခန်းလေးမှာဖွင်.ထားတာပါ ။ ခတ်နွမ်းနွမ်းပေမဲ. သန်.သန်.လေးရောင်း တာပါ ။ ဈေးကလဲမဆိုးဘူး ၁၀၀ဝ နဲ. ၁၅၀ဝ ဝန်းကျင်ဆို တစ်ယောက်စာ ဝဝ စားလို.ရပြီ ဒါနဲ. ဆာမိလည်း ဟင်းတွေထဲ.ထားတဲ.မှန်ပုံးနားသွားပြီးစပ်စုရင်းနဲ. ဟင်းခတ်ပေးနေတဲ.ရခိုင်မလေး ကိုဟင်းအမည်တွေမေးမိတယ် ။ဟိုမေး ဒီမေး နဲ. ဟင်းတစ်မျိုးလဲရောက်ရော ဆာမိမျက်လုံးပြူးသွား ပါရောလား ………ရခိုင်မလေးက အသံ ဝဲ ဝဲလေးနဲ.ပြောပါတယ် …ဘာတဲ. …. “ ကြိုက်ဖုတ်စိုက်” ….. တဲ. …… ဆာမိလည်း ခတ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားသဗျ …..ဆဲများ ဆဲလေသလား ဟုတ်သေးပါဘူး … ဆာမိကြောင်သွားတာကို သတိထားမိတယ်ထင်တယ် တစ်လုံးချင်း ပီ ပီ သသ ထပ်ပြောပါတယ် ..။ “ ကြက် …ဖုတ် ….စိုက် ” ….ဒီလိုကိုး ….ဒါဆို ဆာမိသိပါပြီ ။ဆာမိလည်းရခိုင်မိတ်ဆွေတွေနဲ.နေဘူး တာဆိုတော. သူပြောတာကိုမှန်းလို.ရပါတယ် ။သူပြောချင်တာက ဒီလိုပါ “ ကြက်ဖုတ်စပ်” ပါ ။ ကျေးဇူးပြုုပြီး ရွာသားများနဲ.စာဖတ်သူများ ပြောင်းပြန်တော. မရွတ်လိုက်ပါနဲ.နော် …. သဂျီးက ဆဲတယ်ထင်ပြီး အရေးယူနေပါဦးမယ် ။ဒါနဲ. ဆာမိလဲ ဘယ်လို ဘယ်လိုချက်ထားသလဲ ဆိုတာ ဆက်မေးပါတယ် ။ တော်ကြာ မှာပြီးမှ မအပ်မရာတွေပါလာမှဖြင်. …….. ဒါပေမဲ. ဟင်းနာမည်တော. ဆာမိလည်းရုတ်တရက် မခေါ်ရဲသေးဘူးဗျ ။ပြောင်းပြန်များရွတ်မိရင် လက်ထဲက သံယောင်းမနဲ. ဆော်ထည်.လိုက်မှာစိုးလို.ပါ ….ဒီတော. လက်ညှိုးလေးထိုးပြပြီး “ အဲဒီဟင်းက ဘယ်လိုချက်ထားတာလဲဟင်” လို. မျက်နှာချိုသွေးပြီးမေးလိုက်တာပေါ. ……။ ရခိုင်မလေးက ရခိုင်သံ ဝဲဝဲလေးနဲ့ရှင်းပြပါတယ် ….ဒီလိုပါ ….ကြက် ကိုမီးဖုတ်ပြီးငရုပ်သီးစိမ်းစပ်စပ်နဲ. ချက်ထားလို. ကြက်ဖုတ်စပ် လို.ခေါ်တာပါတဲ.ဗျာ …….။ ဆာမိလည်း ဒီဟင်းကိုဘဲရွေးပြီးမှာလိုက်ပါတယ် ၊ နောက်ထပ် ဟင်းအရံအဖြစ်နဲ. ဘာမှာရမလဲကြည်. တော. ငှက်ပျောဖူးကို ငပိလေးပေါက်ပြီးငရုပ်သီးနဲ. ကြော်ချက်လေးကိုသွားတွေ.ပါတယ် ။တကယ်. ရိုးရာဟင်းပါ …..အင်း ….. ငန်ငန်စပ်စပ်တွေများနေပြီ ဆိုတော.ပြောင်းဖူးကြော်လေးပါတွဲမှာလိုက် တယ် ….။ စားကောင်းလိုက်တာဗျာ …..မီးသင်းနံ.လေးမွှေးတဲ.ချိုချိုစပ်စပ် ကြက်သားဟင်းလေးရယ် ၊ ရခိုင်ရိုးရာ ငှက်ပျောဖူးကြော်ချက်လေးရယ် ၊ငရုပ်သီးစပ်ရင် လျှာကိုချော.မြှူပေးတဲ.ပြောင်းဖူးကြော် လေးနဲ. ဟင်းချို ချဉ်ချဉ်လေးက ဆာနေတဲ.ဗိုက်ကို ထိန်းမရတော.ဘူးဗျို. …..လျော.စားလိုက်တာ လက်ထဆေးတော. ပုဆိုးတောင် ကျွတ်မတတ်ပါပဲ ။ဒီကြားထဲ မန်ကျီးမှဲ.လေးပေါက်ပြီး ထောင်းထား တဲ. ရခိုင်ငပိ်ထောင်းလေးကို သခွားသီးစိပ်လေးနဲ.တို.စားရတာကလည်း တကယ်.ကိုထမင်းမြိန်စရာပါ အဲဒီမှာပဲ ….ရွာသူရွာသားတွေကိုသတိရသဗျ ….အစားကောင်းစားရရင် မိတ်ဆွေကောင်းကိုသတိရ တတ်တယ်ဆိုတော. ….ဒီလိုနဲ.စဉ်းစားမိတာက ရွာထဲက အိမ်ရှင်မများ နဲ.တကွ အိမ်ရှင်ထီးလူပျိုကြီး များလည်းစိတ်ဝင်စားရင်ချက်စားလို.ရအောင် ဟင်းချက်နည်းလေးမေးခဲ.ရတာပေါ.ဗျာ ……. စိတ်ဝင်စားကြရင်လည်းချက်ကြည်.ကြတာပေါ.နော် ….စားကောင်းရင် ရခိုင်ရိုးရာဟင်းတစ်ခွက်အဖြစ် မြတ်မြတ်နိုးနိုးဂုဏ်ယူပေးလိုက်ကြပါ ။ စားမကောင်းရင်တော. ဆာမိရဲ.ညံ.ဖျင်းမှုအဖြစ်မှတ်ယူပြီး ဆာမိကိုသာအပြစ်တင်ကြပါတော.ဗျာ …………………………။ ကဲ ကဲ စလိုက်ကြစို. ….. ပထမဆုံး ကြက်ကို အတုံးလေးတွေ မလှီးခင် မီးဖုတ်ရပါမယ် ။ အသားကင်တဲ.စက်နဲ.မရပါဘူးဗျာ ….မီးသင်းနံ.လေးလိုချင်တဲ.အတွက် မီးပြရပါမယ် ..၊ မီးကင်လို. အနံ.လေးထွက်ပြီး အရေပြားနေရာတချို.မီးကျွမ်းပြီဆိုရင် အနေတော်လှီးပြီး ဆား၊နနွင်း နဲ. ဟင်းခတ် မှုန်.တို.ကို အနေတော်ထည်.ပြီး နယ်ထားရပါမယ် ။အဲ ….မပါမဖြစ်ကစပါးလင်ဗျ ။စပါးလင်ကို နုတဲ. ခေါင်းပိုင်းကိုလှီးပြီး ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူတို.နဲ.အတူ ညက်ညက်လေးထောင်းရပါမယ် ။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာများအနေနဲ. ငရုပ်ဆုံမရှိရင် ကြိတ်စက်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် ….။ကြက်သွန်နီကိုတော. မထောင်း တော.ဘဲ ပါးပါးလှီးပြီး ဆီသပ်တဲ.အခါမှာနွမ်းစေဖို.ရောထည်.ပြီး ဆီအနည်းငယ်နဲ.ဆီပူထိုးပါ ။ ဒီဟင်းမျိုးက ဆီများရင်စားမကောင်းပါဘူး ဆီလည်ရေလည်(သို.) သောက်ဆမ်း ပုံစံချက်ရမှာပါ ဆီပူထိုးဆီသပ်တဲ.အခါမှာလည်း စပါးလင်နှစ်ပင်သုံးပင်လောက်ကို ထုထောင်း ၊ စည်းထုပ် ထုပ် ပြီး ရောထဲ.လိုက်ရပါမယ် …။။ကြက်သွန်တွေနွမ်းပြီး မွှေးစပြုတဲ.အခါမှာတော. ငရုပ်သီးတောင်.ပွ ခြောက်ကိုထောင်းပြီးဆီပူထဲမှာထဲ.လို. အရောင်တင်အဖြစ်သုံးရပါမယ် ……။ ပြီးရင်တော. စောစောက ဆား ၊ဆနွင်း နယ်ထားတဲ.ကြက်သားတုံးလေးတွေကို ထည်.လို.ရပါပြီ ။ ကြက်သားနဲ.အတူ ငရုပ်သီးစိမ်းများကိုလည်းလိုသလာက်ထဲ.ပြီး ရေနွေးရော ၊အဖုံးအုပ်ပြီး ကြက်သား နူးရင်ဖြင်. သုံးဆောင်လို.ရပါပြီ …။ဒီချက်နည်း လေးကတော.ပါရမီစိန်ဂေဟာမျက်စောင်းထိုးက “ ဆွေသဟာ”ဆိုတဲ. ရခိုင်ထမင်းဆိုင်လေးက စားဖူးခဲ.တာလေးကို အမှတ်တရ ရေးလိုက်ရတာပါ ။ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာများအနေနဲ.လည်း မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းရင် မြည်းစမ်းနိုင်စေဖို. လက်တို.လိုက် ရပါတယ် ……..။
ဒါ့ပုံလေးဘာလေး နဲ့ တင်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ရခိုင် ဟင်း ဆိုရင် အာပူလျှာပူဘဲ မျက်စိ ထဲ အရင်မြင်မိတာ၊
ပုံမပါလဲ လျှာလည်အောင်ရေးထားလို့ ကျေးဇူးပါ ကဆာမိ ရယ်။ :-)
ဖတ်ရင် ဖတ်ရင်းနဲ သရည်တောင် ကျလာပြီ. ချလွတ်..:D
ဒီ ဆို်င်က ကျွန်မ နဲ သိတယ်… ကျွန်မ တို့နယ်က ပဲ… မြို့ထဲမှာ ရောင်းနေတဲ့ ဆိုင်တွေနဲ စာရင် ဈေးသက်သာပါတယ်..။ ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူး..။ ဒါပေမဲ ကျွန်မ တို့နယ် ဘက်မှာတော့ အဲဒီ ရွာ လူတွေ ချက်တာ လက်ရာ အညံဆုံးပဲ.. ။ လက်ရာအကောင်းဆူံက တော့ ကျွန်မ တို့ရွာက လူတွေရဲ့လက်ရာပဲ.. ဟဲဟဲ.. လက်ရာညံတဲ့လူတွေ တောင် ဒီလောက်ကောင်းနေရင်.. လက်ရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ရွာကလူတွေ ချက်တာ ဆိုရင်တော့.. အိုး.. ပြောစရာတောင်လိုမှာ မဟုတ်ဘူး..။ ခြွင်းချက် . ကျွန်မ မပါ..
စိန်ကဲ ရွှေကဲ ခတ်တတ်ယုံမက
အရီးဒေါ်လတ်ရေ ဓတ်ပုံကမရိုက်တတ်လို ့ပါ တခါလောက်တော ့စမ်းကြည် ့
We R One တို ့ရွာကသူတွေဆိုင်ဖွင် ့ထားရင်ပြောပါဦး။
ရခိုင်ဟင်းတွေဆိုလျှင် .. အပူစပ်တွေများလို့ …. မြန်မာပါးစပ်နဲ့တော့ အံကိုက်ပါပဲ … ။
ကိုဆာမိရေ .. ကိုယ်တိုင်ကတော့.. အိမ်မှာရှိချိန်နည်းလို့ …. ရယ်ဒီမိတ်တွေပဲ ဝယ်စားတာ များပေမယ့် … ဒီဟင်းတွေကတော့ သွားရေကျစရာပါပဲ … နောက်တခါ ချက်ပြီးရင် လက်တို့လိုက်ပါ …. လာမြည်းပေးမယ်လေ .. အဟီး
ကြက်ဥတောင် ကျက်မကျက်မသိ ဆိုတော ့
အောင်မယ်လေး။ အဲဟင်းမျိုးစားဖူးတယ်။ စပ်တာမှ နားထဲကနေတောင်မီးခိုးထွက်ရောမှတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ သူ့အနံ့က ဆွဲဆောင်လွန်းလို့ မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်စားရတဲ့ဟင်းပါ။ ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင်တွေတိုင်း မပါမဖြစ် ဟင်းပေါ့။ ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင်တွေသွားရင် သူ့ကိုအလယ်တည်ပန်းကန်နဲ့ချထားတာ။ အားရပါးရစားကြ၊ မြီးကြပေါ့။ အရက်၊ ဘီယာနဲ့မြီး ရင်ရှယ်ပဲ။
ကြည်ဆောင်းလဲ ရခိုင်ဟင်းတွေဆို ကြိုက်တယ် ၊ ဆီမပါသလောက်ဘဲမို့ ကျန်းမာရေး အတွက်လည်းကောင်းတယ် ၊စပ်တာလဲ ကြိုက်တယ် ။ ရခိုင်သံဝဲတာလည်း နားထောင်လို့ကောင်းတယ်
ကိုဆာမိရယ်..သွားရေကျအောင်ရေးတယ်..ကျမလည်းဆီမပါ..အစပ်ကဲတဲ့အရသာနဲ့ ရခိုင်ဟင်းတွေကိုအရမ်းကြိုက်တယ်..ဟင်းချက်နည်းလေးကိုလည်းစမ်းကြည့်အုန်းမယ်… ရှဲရှဲပါ.
ရခိုင်ဟင်းထဲမှာ ကိုတံငါ ဟင်းလည်း ကောင်းတယ် နာမည် လေး သဘောကျလို့ ဘာလဲလို့ သိချင်တာနဲ့ မှာစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဟင်းပါဲလေး လာချတော့လည်း ကောင်းမှ ကောင်းပဲ..
အူးလေးရာဇာချန်ဂင်သံဂျောင်း ဒို ့က ဒါလဲရသကိုးဗျာ..
ကျုပ်ကိုလဲ ကြိုက်ဖုတ်စိုက် တစ်ပွဲလောက်..
ဝှက အရခိုင်လူမျိုးဆိုဒေါ့ စဂါးဝဲသကွဲ ့..တီးခံကြပါလော့
အရက်ဘီယာနဲ ့ဆို အသက်ထွက်မယ်ထင်တယ်
Crystalline နဲ့ကြည်ဆောင်း
ကျေးဇူးပါ ဒီခေတ်က ဆီလျော ့စားကြတာဆိုတော့ok ပါတယ်
ဒေါ်ဆူးပြောတဲ ့တငါဟင်းဆိုတာ ပင်စိမ်းနံ ့လေးမွှေးနေတဲ့ရေချို ဟင်း
အစာလဲစား အန္တရယ်လဲကြည် ့ရှောင်ဟေ ့
သံယောင်းမ ကဂေါင်းမရွေးဘူးတဲ ့
စားဖူးတယ် ကိုဆာမိရဲ့။ ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပဲသွားသွား သူတို့ ပွဲပဲလုပ်လုပ် အဲ့ဟင်းက အမြဲပါတယ်။ အသိအိမ်နားမှာလဲ ရခိုင်ရှိတော့ ရောက်တုန်း ကြက်မွှေးမီးမြှိုက်နံ့ထွက်လာပြီ ဆိုသွားတောင်းတာပဲ။[:))] အိမ်မှာစားတော့လူသိပ်မမြင်တော့ ငိုလိုက်စားလိုက်ပေ့ါ။ အပြင်မှာ စားရင်တော့ စားလိုက် အအေးသောက်လိုက် ရေသောက်လိုက်ပေါ့။ [O:]ဟီဟိ ရခိုင်တွေနဲ့ခင်တော့ ခဏခဏစားရတာ။ သူတို့ကတော့ ဘီယာအရက်နဲ့တွဲစားတာပဲ။
အစပ်ကြိုက်တဲ့ မေဖလားဝါးကတော့ ရခိုင်ဟင်းမှန်သမျှအကုန်ကြိုက်ပြီးသားပါပဲ………..
ခုလဲ ဒီကြက်ဖုတ်စပ်ဟင်းကိုချက်ကြည့်ဦးမယ်…………ခုလိုပြောပြပေးတဲ့ကိုဆာမိရေ ကျေးဇူးနော။
အဲဒီ့ ဟင်းလေးနဲ့ စားလိုက်ရရင်တော့
မြန်မာကြက် ကလေးနဲ့ ချက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ ဘိုင်ကြီးဆာ ရယ်
ကျုပ်အခု မိမိ ဆိုတဲ့ ရခိုင်မလေးတစ်ယောက်နဲ ့အသိဖြစ်နေတာဗျ
ဘိုင်ကြီးဆာ ရဲ ့ဟင်းနည်းလေးကိုဘဲ ကူးပြီး
မဒေပမ် ကို ချက်ကျွေးခိုင်းရသေးတာပ။
ကြုံရင်တော့ အရံဟင်း ဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျောဖူးကြော်ချက် လေးအကြောင်း ရေးပါအုံးမယ်.. ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံး ဟင်းဖြစ်နေလို့ပါ..။ ရခိုင် ဟင်းတွေ က စပ်တော့ စပ်တယ် အရမ်းကြီး မစားနိုင်လောက်အုံ စပ်ပျံလန် နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူ..။ ထမင်းစားတဲ့ အခါ အစပ်လေး ပါမှ ထမင်းမိန်တာကို.. ။
ဆာမိပြောပြတာနဲ့တင်လျှာရည်ကျသဗျာ။ ကြုံရင်တော့ သွားကစ်အုန်းမယ်။ ကိုဆာမိတို့များ ချက်နည်းလေး တောင်သင်လာခဲ့သေး .. ဟန်ကျသဗျာ
စားကောင်းမယ့်ဟင်းပဲ … စမ်းချက်ကြည့်ချင်ပေမယ့် ကင်စရာမရှိတာ ခက်တယ် …
ဆွေသဟာမှာပဲ သွားစားလိုက်တာ အေးမယ်ထင်ပါတယ် …
ပြီးမှ ဒီပိုစ့်မှာ လာမန့်ဦးမယ်…
ကာလသားချက်က ကုလားမဆလာ ဖြင့်ချက်ပါတယ်ရှင်
သဂျီးတို ့အရပ်တော ့မသိဘူး ဒီမှာတော ့မိုးတွေစွေနေလို့ဒီဟင်းမျိုး
သိပ်လိုက်။ညကတောင် ပါဆယ်သွားဝယ်သေး ။
ကင်တာကသူတို့ကအမွှေးမနှုတ်ပဲ အမွှေးနဲ့ပါကင်တာသဂျီးရဲ့။ ပြီးမှ အမွှေးနှုတ်တာ။ ငြုတ်သီးနဲ့ စပါးလင်ကတော့များများထည့်တယ်။
ရှဉ်ငံရှပ်ရှို တိပ်ကြိုက်လို ့
စမ်းချက်ကြည် ့ဗျာ မြနာမာကြက်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ ့
mamanoyar ရေ ဆွဲသာဆွဲ အားမနာနဲ ့
ကိုပေ ရေ့မန်းလေးမှာဆို ရာသီရွေးရလိမ ့် မယ်နော်
မြန်မာစီတဇင်ရေ စားမကောင်းရင်လဲကျုပ်ကိုသာအပစ်တင်တော ့ဗျာ
မမအညာသူရေ အညာစာလေးတွေလဲရေးဗျာ မတူတာတွေမြည်းရတာပေါ ့
မဝေဝေ ရေ မဝေဝေတို ့EASY COOK ဆရာတွေချက်ရင်ပိုကောင်းမှာဗျ
ကဲ ဦးပါလေယာသွားစားမယ်တဲ့ဘယ်သူလိုက်ကြမလဲဟေ ့
သာမီးလည်း ချက်တတ်ပ့ါ အူးဝေးရယ်
ရခိုင်မတွေ ချောရင် အားဂျီးဂွတ်သဗျို့…။ ရခိုင်မချောချောလေး ဓါ့ပုံရှိရင် တင်ပေးဗာလား…။ ရတနာမိုင်ဂလေးဂဒေါ့ ရှယ်ဗဲ..။ ခြစ်ချင်တယ် မိုင်ဂလေးရယ်…ခွီး ဂရား…။ :cool:
ဗျို့ကိုကမ်း
ရာသီကတော ့ဘောသမားအကြိုက်နော့မသဲနုပြောသလိုဘီဘီနဲ ့ဆွဲလိုက်ရင် ဂွတ်သဗျ
ကျုပ်က မချက်တတ်ဘူးဗျ စားရုံသက်သက်
ဦးကြောင်ရယ် သံယောင်းမနဲ ့အဆော်ခံနေရပါဦးမယ်
ချက်နည်း သီအိုရီ သိပေမဲ့
ရခိုင်မလေးကို ကြိုက်ရင် ကုလားအော်သီး
ငါးလုံးလောက် တစ်ထိုင်းဒေး စားပျဘာ……
ကုလားအော်သီး ကနေပြီးတော့ ကြောင်အော်သီး အဖြစ် မကြာခင် နာမည် ပြောင်းသွားနိုင်တယ် ထင်တယ်။
စပ် လိုက်တာဗျာ ကိုဆာမိ ရေတစ်ခွက် လောက်ဗျို့